Manontania olona eo an-toerana: Aiza ny fivarotana kafe tsara indrindra any Kildare - IntoKildare
Vatosoa miafina, Fitsidihana voalohany, Food & Drink, Torohevitra eo an-toerana
Mila kafe kafe ve ianao mba hitohizanao mandritra ny andro sarotra ao anaty lasely? Na mety mila manangana ny tongotrao ianao ary misonon-tena rehefa avy miantsena tsara manodidina an'i Kildare…
Na inona na inona antony, makà kafe kafe tsara ao amin'ny iray amin'ireo fivarotana kafe tsara indrindra ao amin'ny distrika, natambaran'ny mpamaky ny IntoKildare.ie.
Lahatsoratra zarain'ny The Green Barn @ Burtown House (@burtown_house)
Lahatsoratra iray nozarain'i Robert Mehigan (@r_mehigan)
Lahatsoratra zarain'ny Shoda Market Café (@shodacafe)
Shoda Café no kafe fisakafoanana farany an'i Kildare, miorina amin'ny foto-kevitra vaovao sy mahasalama. Mpianatra roa nahazo diplaoma tao amin'ny Shannon College of Hotel Management izay niara-niasa tamin'ny fampiasany ny zavatra niainany azo avy amin'ny fiasana eran'izao tontolo izao tamin'ny alàlan'ny fandraisana vahiny hananganana Shoda Market Café.
Vatosoa miafinaFitsidihana voalohanyFood & DrinkTorohevitra eo an-toerana